"Sunsuma Jijjiiruun Marqa Hin Midhaaksu" -
Dhugaan ilma nama bira jiraachuu qabu kan yoomuu jijjiramuu fi daddaquu hin qabne waan jibbu jaalachuu dhabuudha. “MAN NO SEE DIRT , NO HEAR DIRT AND NO CLEAN DIRT” Kun akkamitti danda’amaa?
Haarawoomsa,Haarawoomsa,Haarawoomsa…oggayyuu Haarawoomsa maal Haarawoomsuu? Bofni Umrii isaa muuxata malee hadhaa isaa hin muuxatu.Bofni yoomiiyyuu eenyummaan isaa Bofuma.
Kan Impaayira Itiyoophiyaa ammoo kanaan adda,Haxxee Gabrummaa kan hulaa Bilisummaa dhoowatee duuchee bira ta’u, danqaraa bara baraati (Vicious cycle).
Waan ta’eefis hadha Hoogantooni OPDO saalfii tokkoon ala gadi bahuun , Haarawoomsa haarawoomsa jedhaa lallabuun Ummata Oromoo gowwoomsuu osoo hin taane Ofii Daallee ta’uudha. “Fakkeessaan Shishii Buna hin gootu” Fakkeessuu fi fafakkeessuun ergama gooftolii isaanii irraa fudhatan galmaan gahuuf jecha Ummata Oromoo afotti bahuun akka waan aantummaa Oromoo qabanii of fakkeessuun keessaa fi alatti wal ijaaranii xibaaraa oolaa buluun fokkuudha; Safuudha, safuu Waaqaa lafati, Cubbuu araarama hin qabne kan seeraa fi seenaanis wal nama gaafachiisu kan WAAQNILLEE itti nama gaafatuudha.